Ch 2 Luke – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaRuka / Ch 2 Luke
2:1 Zvino zvakaitika nemazuva iwayo, chiga chakabuda kubva kuna Kesari Agasto, saka kuti nyika yose ingadai inyorwe.
2:2 Iri raiva okuverengwa wokutanga; zvakanga kwakaitwa mutongi weSiria, Kwiriniyo.
2:3 Vose ndokuenda riziviswe, mumwe nomumwe kuguta rake.
2:4 Ipapo Josefa akakwira achibva Garirea, kubva muguta reNazareta, kuJudhiya, kuguta raDhavhidhi, rinonzi Bhetirehemu, nekuti waiva weimba nedzinza raDhavhidhi,
2:5 kuti tinzi, naMaria mukadzi wake vakavimbika, uyo aiva mwana.
2:6 Zvino zvakaitika kuti, Vachiri ikoko, mazuva apera, saka kuti aizobereka.
2:7 Ndokuzvara mwanakomana wake wedangwe. Akamuputira nemicheka, akamuvanzarika muchidyiro, nekuti makanga musina nzvimbo yavo panguva yevaeni.
2:8 Zvino kwakange kune vafudzi munyika iyoyo, kuva vakasvinurira uye kurinda usiku makwai avo.
2:9 uye tarira, mutumwa waShe akamira pedo navo, nokupenya Mwari kwakavakomba, uye vakakundwa vaine kutya kukuru.
2:10 Zvino mutumwa akati kwavari: "Usatya. For, tarira, I kukuparidzirai mufaro mukuru, uchava kuvanhu vose.
2:11 Nokuti nhasi Muponesi aberekwa kwamuri muguta raDhavhidhi: ndiye Kristu Ishe.
2:12 Uye ichi chichava chiratidzo kwamuri: muchawana mwana akaputirwa nemicheka uye avete muchidyiro chezvipfuwo. "
2:13 Uye pakarepo kukavapo pamwe nemutumwa chaunga hondo yokudenga, vachirumbidza Mwari vachiti,
2:14 "Rumbidzo kuna Mwari kumusoro-soro, uye rugare panyika kuvanhu wakanaka. "
2:15 Zvino kuti, apo Ngirozi vabva kwavari vaenda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, "Ngatiyambukirei mhiri kuBheterehema ona shoko iri, iyo chaitika, Ishe akazivisa kwatiri. "
2:16 Vakaenda vakakurumidza. Vakawana Maria naJosefa; uye mucheche avete muchidyiro.
2:17 ndokubva, paakaona izvi, vainzwisisa shoko zvataurwa kwavari pamusoro mukomana uyu.
2:18 Uye vose vakazvinzwa vakashamiswa nezvinhu izvi, uye nezvinhu zvakange zvataurwa kwavari nevafudzi.
2:19 Asi Maria wakachengeta mashoko awa ose, akazvifungisisa mumwoyo make.
2:20 Zvino vafudzi vakadzokera, vachikudza nokurumbidza Mwari pamusoro pezvinhu zvose zvavakange vanzwa nekuona, sezvakanga zvataurwa kwavari.
2:21 Zvino mushure memazuva masere apera, kuti mukomana kuti kudzingiswa, zita rake ndokunzi Jesu, sezvo akanzi nemutumwa asati agamuchirwa mudumbu.
2:22 Uye pashure mazuva ekunatswa kwake akazadzika, nemurairo waMozisi, vakauya naye kuJerusarema, kuti vamukumikidze kuna Ishe,
2:23 sokunyorwa kwazvakaitwa mumutemo waJehovha, "Nokuti chirume kuzarura chizvaro, chichanzi chitsvene kuna Ishe,"
2:24 uye kuti ape chibayiro, maererano nezvakanyorwa pamurairo waIshe, "Magukutiwa maviri kana kuti hangaiwa duku."
2:25 uye tarira, kwakange kune munhu muJerusarema, ainzi Simiyoni, uye murume uyu akanga akarurama uye aitya Mwari,, akamirira kunyaradzwa kwaIsraeri. Uye Mweya Mutsvene waiva naye.
2:26 Uye akanga agamuchira mhinduro kubva Mutsvene: kuti arege kuona rufu kwake asati aona Kristu waIshe.
2:27 Akaenda noMweya kutemberi. Zvino mwana Jesu akauyiswa nevabereki vake, kuti chiito nokuda kwake netsika yemurairo,
2:28 iyewo akamutora, mumaoko ake, uye akaropafadza Mwari uye akati:
2:29 "Zvino iwe vangaramba muranda wenyu norugare, O Ishe, maererano neshoko renyu.
2:30 Nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu,
2:31 rwamakagadzirira pamberi pezviso zvevanhu vose:
2:32 chiedza chekuzarurira vahedheni, nekubwinya kwerudzi rwenyu Israeri. "
2:33 Uye baba vake namai vakashamisika pamusoro pezvinhu izvi, zvakarehwa pamusoro pake.
2:34 Zino Simioni akavaropafadza, akati kuna mai vake Maria: "Tarirai, uyu yakatogadzirwa kuitira kuparadza uye nokumutswa zhinji muIsraeri, uye chiratidzo chicharambwa zvaipesana.
2:35 Uye munondo achapfuura nemweya wako pachako, kuti ndangariro dzemoyo mizhinji dzifukurwe. "
2:36 Uye pakanga muporofitakadzi, Anna, mwanasikana waFanueri, kubva kurudzi rwaAsheri. Akanga chaizvo vakwegura, uye akanga agara nomurume kwemakore manomwe kubvira paumhandara hwake.
2:37 Zvino akanga ari chirikadzi, kusvikira wake gore rechina masere. Uye pasina wakabva mutemberi, iye aiva muranda achitsanya nokunyengetera, usiku nemasikati.
2:38 Uye vachipinda panguva iyoyo, Akabvuma kuna Ishe. Uye iye aitaura naye vose vakanga vakamirira kudzikinurwa waIsraeri.
2:39 Uye akanga mushure zvinhu zvose zvaienderana nemurairo waIshe, vakadzokera kuGarirea, kuti guta ravo, Nazareta.
2:40 Zvino mwana akakura, uye akasimbiswa pamwe kuzara uchenjeri. Uye nyasha dzaMwari dzaiva maari.
2:41 Uye vabereki vake vaienda kuJerusarema, panguva yakatarwa wePaseka.
2:42 Zvino wakati vava nemakore gumi nemaviri, vakakwira kuJerusarema, maererano netsika yemutambo zuva.
2:43 Uye apedza mazuva, kana vadzoka, mukomana Jesu akasara muJerusarema. Uye vabereki vake havana kuziva izvi.
2:44 asi, zvikanzi ari kambani, vakafamba wezuva, vanomutsvaka pakati pehama nekuvazikanwi.
2:45 Uye kwete amuwana, vakadzokera kuJerusarema, vanomutsvaka.
2:46 Zvino kuti, pashure pemazuva matatu, vakamuwana ari mutemberi, agere pakati pavadzidzisi, vachiteerera achivateerera nokuvabvunza.
2:47 Asi vose akamunzwa akashamiswa pamusoro kungwara kwake uye mhinduro dzake.
2:48 Uye pamusoro achimuona, vakashamiswa. Uye mai vake vakati kwaari: "Mwanakomana, Zvamaita izvi nenzira kwatiri? tarirai, baba vako neni vaitsvaka iwe mukusuwa. "
2:49 Akati kwavari: "Sei iwe vakanga kunditsvaka? Nokuti hamuna kuziva kuti zvinokosha kuti ini kuva izvi zviri Baba vangu?"
2:50 Uye havana kunzwisisa shoko raakataura kwavari.
2:51 Uye akaburuka navo uye vakaenda kuNazareta. Uye iye mudiki kwavari. Uye mai vake vakachengeta mashoko iwayo ose mumoyo mavo.
2:52 Jesu akawedzera panjere, uye zera, uye nyasha, naMwari nevanhu.